musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Guestpost » Chinyorwa cheMusoro Anokurudzira Mabhuku Ekubatsira Iwe Kukura
Mabhuku ane simba, rinoshandura huchenjeri hunogona kushandura maratidziro ehupenyu hwako hwese. Izvi zvinoenda kune hutano, hupfumi, hukama, uye zvese zvimwe zvinonyanya kukosha.
Kuti urambe uchikura uye uchichinja zuva nezuva, ingoverenga mapeji makumi maviri ebhuku rakakura! Iyo ROI inoshamisa.
Heano mamwe epamusoro anokurudzira mabhuku ekukubatsira iwe kukura.
Zvakare, kune mamwe matipi ekuti uwane iyo yakanyanya kukosha kubva kune peji rega raunotendeuka.
Kunyangwe vanamuzvinabhizimusi vane mukurumbira vanoziva: kurudziro ndeyechinguvana, uye haungamboita kunge unozvirova panguva yakakodzera. Nekuverenga peji kana maviri ebhuku rinokurudzira, iwe unowana iyo jolt iwe yaunoda kutanga.
"Iyo 7 Tsika dzeVanhu Vanonyanya Kubudirira naStephen R. Covey ibhuku rakanaka kukubatsira kuti unzwe uchibudirira uye uchikurudzirwa, ”akadaro Mary Berry, Muvambi uye CEO of Cosmos Vita. "Inosanganisira maturusi ekuwana zvaunoda asi uchisimbisa kukosha kwekutarisira izvo zvinoburitsa zvakabuda. Uyezve, inobata pazvinhu zverusununguko uye kuzvikunda, kudyidzana nekushanda pamwe nevamwe, nekuenderera mberi nekuvandudza. Iri bhuku rinokubatsira kuti unzwisise zvese zvakakosha zvaunofanira kufunga paunenge uchizadzisa zvinangwa zvako. ”
Kukurudzira, kuraira, tsika dzakanaka - ndezvipi zvimwe zvaunoda kuti ubudirire?
Nekusangana nemudzidzisi mukurusa wehupenyu, asi bhuku hombe rinogona kukubatsira kuti unzwisise zvinhu zvakadzama uye nekuita kwakakosha kubudirira panguva dzakakosha.
"Essentialism: Iyo Yakarangwa Kutsvaga Kwekubudirira kubva kuna Greg McKeown anotengesa zvinhu zvese kusvika pazvinhu zvakakosha, ”akadaro Jared Pobre, CEO uye Co-Muvambi of Caldera + Lab. “Kana zvasvika pakutonga nguva, hazvisi zvekungodzikisira zvinhu zvese pasi. Ndezvekuita kuti zvinhu zvakanaka zviitwe. Kunyatsosarudza kwatinoshandisa simba redu kunoita kuti titarise pane zvinonyanya kukosha. ”
Dzidza muhupenyu chaihwo, asi shandisa zvidzidzo zvinobva mumabhuku zvakare kuti uwedzere kubudirira.
Paunoverenga bhuku, unopinda mupfungwa nemumafungiro evamwe vevanonyanya kufunga pasirese. Ndiani angave akapfuudza iwo mukana wakadai, nemutengo wakakura kudaro?
"Jonathan Franzen ndomumwe wevanyori vapenyu," akadaro Jorgen Vig Knudstorp, Executive Executive of LEGO Brand Boka. "Bhuku rake razvino ibhuku rekunyepedzera iro, pakati pezvimwe zvinhu, rinoti kuverenga nekunyora rondedzero, inova musiyano wakanaka kune meseji dzinokurumidza, zvinyorwa zvemagariro, uye misoro mipfupi yenhau."
Franzen ndomumwe wevakawanda! Sarudza munyori waunoda uye wobvarura kuburikidza yavo yese bhaibheri kuti unyatso kuwana mufananidzo uzere.
Kazhinji kangani isu tinonyatso kuongorora kwedu zviito uye maitiro? Mamwe mabhuku anoda kuti titarise kwenguva yakareba maitiro edu uye tigadzirise kana zvichidikanwa.
“Rimwe remabhuku anokurudzira zvikuru andakaverenga anoti Simba reTsika, Sei Tichiita Izvo Zvatinoita MuHupenyu neBhizinesi, naCharles Duhigg, ”akadaro Ashley Laffin, Mutungamiriri Mukuru weBrand Management at Mai Tsvina. “Iri ibhuku rakanakisa rinogona kuita kuti unzwe uchibudirira uye uchipiwa simba pamusoro pebasa rako. Iri bhuku rinofukidza akasiya siyana, kubva kumitambo kuenda kumabhizinesi makuru eDTC kuenda kumafambiro uye anotarisa zvinotarisisa sainzi iri kumashure kwetsika. Inoongorora kuti sei vanhu vajaira uye inotsanangurawo kuti tsika dzinogona kuputswa kana kuchinjwa sei. ”
Mazuva ese atinorarama anoumbwa netsika, hutano kana zvimwe - tora bhuku iri zvakakomba!
Hakuzovi nekugara kune kuwanda kwemhinduro dzakanaka kana uchitanga bhizinesi kana kuteedzera chinangwa muhupenyu, kunyanya mumatanho ekutanga. Tsvaga bhuku rinokukurudzira uye rinokupa iwo mafungiro anodikanwa kuti ubudirire.
“Ndakanakidzwa nekuverenga Tora Kubata naGino Wickman naMike Paton, ”akadaro Kiran Gollakota, Co-Muvambi of Waltham Clinic. "Injiva yekugara yakatsunga semutungamiri uye muzvinabhizimusi kana zvanetsa kuona mwenje pamagumo emugwagwa. Yakandidzidzisa mabhureki kuti ndirambe ndichienderera kumberi kunyangwe paive pasina. ”
Haasi isu tese tinokurudzirwa nenzira imwechete yekunyora uye nenyaya, saka tsvaga bhuku rinovhenekera iro moto kwauri.
Kuzvibatsira -Mabwe Anokosha
Kune zviuru zvemabhuku mumhando yekuzvibatsira, mazhinji acho anofukidza ivhu rimwe chete kakawanda. Tsvaga madhaimani mune akaomarara uye uachengete pasherefu yako, nekuti anogona kunge aine simba kwazvo.
“Mabhuku ekuzvibatsira ave musika wakazara, angori madhishi gumi nemaviri asi, mugungwa rezvemabhizimusi zvakashandiswazve uye zvakasimudzwa, ndakakwanisa kuwana huchenjeri hwakawanda uye nhungamiro munaJamie Schmidt Supermaker, "Akadaro Nik Sharma, CEO of Sharma Zvikwata. “Schmidt inopa ruzivo rwakakura kubhengi pakukura kwebhizinesi, kushambadzira, kusimudzira, mhando dzakasiyana dzezvitoro zvekushambadza, kuwedzera, kuita kwevatengi nePR. "Iri raive bhuku rebhizimusi rekuzvibatsira iro randakakwanisa kushandisa muchirongwa chebhizinesi rangu iro rakazopedzisira ratibatsira kukwirisa kupfuura zvataitarisira."
Usakanganwa kushandisa zvawakadzidza kubva kune ekuzvibatsira mabhuku, zvikasadaro, iko kungoverenga kwemahombekombe.
Kunzwisisa New Tech
Sei iwe uchifunga kuti maCEO nevatungamiriri veindasitiri vanogara vachiverenga mabhuku matsva? Ndiwo maitiro avanodzidza nezve mafambiro matsva, matekinoroji ari kubuda, uye zvimwe zvinhu zvinovapa iwo mukana webhizinesi.
"Ndawana Vakagadzira veIntelligence zvinonakidza zvinoshamisa uye tsananguro yakanaka yeAI - yakakosha kuti nyika ifambe nekukurumidza uye inobata nemibvunzo yetsika munzvimbo ino, "akadaro Andrew Penn, CEO uye Managing Director at Telstra.
Hazvisi izvo chete izvo zvidzidzo zvinonakidza, asi zvinokubatsira iwe kuhwina mubhizinesi futi.
Pfungwa dzevanhu dzinogona kunge iri nyaya inonakidza kwazvo pane zvese, uye kune nzira dzisingaverengeke dzekushandisa zvekuwana kiriniki kumutambo webhizinesi. Verenga kumusoro kune psych kuti unzwisise zvirinani iwe nevamwe.
"Nyanzvi yezvepfungwa Carol Dweck anodenha kukosha kwekuva nepfungwa dzekukura mubhuku rake, Pfungwa: Iyo Psychology yekubudirira, "Akadaro Dr. Robert Applebaum, Muridzi of Applebaum MD. “Anofunga kuti chero tikaramba tichishingirira tinoramba tichikura. In Mashiripiti eKufunga Kwakakura, David J. Schwartz anobata kuti chero bedzi tichitenda matiri, tinogona kukunda chero chinangwa chatingafungidzira. Mabhuku ese ari maviri anonzvera musimba repfungwa uye nekuwanda kwekutonga kwatinoita pamusoro pemhedzisiro muhupenyu hwedu. "
Uine kufunga kwakadzama uye nepfungwa dzakasimba, ungakunde sei?
Vazhinji vezvemabhizimusi vanotanga nzendo dzavo nechinangwa chakasimba, asi zvinogona kusanzwisisika nekufamba kwenguva nekuda kwekunetseka, kuneta, uye kusahadzika. Verenga mabhuku anobatsira kuona zvekare icho chinangwa uye kunamatira kuchirongwa chemutambo.
“Mune raSimon Sinek Kutanga ne Nei: Vatungamiriri Vakuru Sei Vanofuridzira Munhu wese Kuti Atore Nhanho, kuziva chinangwa chako ndiko kunoita kuti bhizinesi rako rirambe riri mugwara rekuzadzisa kusvikira wazviita, ”akadaro Rym Selmi, Muvambi of MiiRO. “Pasina yako 'nei', bhizinesi rako rinokanganwa kuti nei riripo, uye vatengi havachave nechikonzero chekutenga kubva kwauri. Nyanzvi yezvepfungwa Angela Duckworth anoti mubhuku rake, Grit: Simba reKushushikana uye Kutsungirira, Kuchengetedza kusagadzikana kwenguva refu kunozopedzisira kwaita kuti iwe usvike pazvinangwa zvako. Mabhuku aya anopa ruzivo rwakakura mukukosha kwekuramba wakaisa pfungwa pachinangwa chako. ”
Hapana bhuku rinozoburitsa pachena chinangwa chako kwauri, chokwadika. Zviri pauri!
Iwe haufanire kuve bhizinesi kuti uwane kukosha kubva kune zvekare mune genre. Zvidzidzo senge hupfumi uye manejimendi manejimendi zviri zvepasirese, saka tanga kuverenga zvimwe zvekare-zvechikoro zvinofarirwa.
"Kune mabhuku akawanda kwazvo akandikurudzira mumakore ese aya, zvakaoma kungodoma mashoma," akadaro Aidan Cole, Co-Muvambi of TatBrow. “Semuridzi webhizinesi, Baba Vakashata Vakashata Baba naRobert Kiyosaki yaive yakanyanya kuverenga. Iri bhuku rinotaura nezve mutsauko uripakati pezvikwereti nenhumbi, iwe zvechokwadi unoda zvimwe zvinhu kupfuura zvikwereti. Zvakare, inotaura nezve mutsauko uripo pakati pekuve mushandi, anozvishandira, muridzi webhizinesi uye investor. Rimwe bhuku rakakura ndere Nzira Yokukunda Shamwari uye Kuchinja Vanhu naDale Carnegie. Iri ibhuku rakanakira hupenyu, rinokudzidzisa zvinhu zvakaita sekufarira vanhu kuti ugone kuvaka hukama hwakareba! ”
Aya ndiwo marudzi emabhuku anongoramba achipa uye anokodzera-zvakanyanya kuwanda kuverenga. Usambofa wakavarega vachisiya shefu yako.
Kukura uye Grit
Mabhuku anoita basa rakakura rekutsanangura yakaoma mazano, asi iwo anopawo anovhenekera maonero pane akareruka mazano emhedzisiro mikuru. Ndiwo mashiripiti emashoko.
"Maererano nenyanzvi yezvepfungwa Angela Duckworth, kiyi yekubudirira inotsamira pa grit," akadaro Carrie Derocher, CMO of TextSanity. “Bhuku rake, Grit: Simba reKushushikana uye Kutsungirira, inotaura kuti sekureba sekuramba uchienderana kwenguva yakareba, iwe unozopedzisira wasvika pazvinangwa zvako. Mubhuku rake rinokurudzira, Pfungwa: Iyo Psychology yekubudirira, Carol S. Dweck anotarisana nepfungwa yekuti kutora pfungwa dzekukura kunotyaira kuedza kwedu kuramba tichikura. "
Iwe unogona kuwana zvinoreva, kurudziro, uye nezvimwe zvakawanda mumabhuku makuru. Wakamirira chii?
Matipi Ekushanda Ari Kure
Mamwe mabhuku anoverenga zvakanyanya semabhuku ekuraira kana mapurani ekuwana imwe mhedzisiro. Izvi zvinogona kuve shanduko yematanho kubva pane zvaunofarira kuverenga munguva yako yekusiya, asi mhedzisiro inogona kuve yakatanhamara.
“Achangoburitswa Dhijitari Muviri Mutauro: Maitiro Ekuvaka Kuvimba uye Kubatana, Hazvina Basa Iyo Kureba naErica Dhawan anoongorora mutauro wemuviri pasi, ”akadaro Tyler Forte, Muvambi uye CEO of Felix Dzimba. “Zvino sezvo mahofisi mazhinji ave kupinda munzvimbo yakasanganiswa, kutaurirana kunoshanda hakuna kumbove kwakanyanya kutsoropodza. Uye nekuwedzera kwemisangano chaiyo, kudzidza kushandura maitiro emuviri kuchakubatsira kuti uve pamwe nekukurudzira vashandi vako. ”
Panogara paine kukosha mukudzidza hunyanzvi, uye mabhuku anogona kukurumidza kuita izvi zvakapetwa kagumi.
Kana iwe uchinzwa wakanamatira mune kwazvakarerekera kana uchingoda kusvetuka kutanga muhupenyu, inguva yekutyora bhuku rinokurudzira. Izvo zvinongotora mapeji mashoma usati wawana imwe yakakosha maonero uye pamwe ungatove uine diki zaruro kana maviri.
"Kukura Pfungwa naJoshua Moore naHelen Glasgow vanoenda mune zvekuramba vachitsvaga kukura, ”akadaro Eric Gist, Co-Muvambi of Awesome OS. “Panogara paine mukana wekukura, uye hatimboregi kukura. Yakandiratidza nzira yekutsvaga mikana mitsva uye kuramba ndichidzidza mune rangu basa. "
Dzimwe nguva, mazwi akakodzera anogona kukubatsira kuti ubve mukudonha uye uwedzere kumusoro panguva chaiyo chaiyo.
Hapana chimwe chinokurudzira kupfuura kuverenga nezve vanhu chaivo uye kwavo kukuru kwehukama hwekuvandudza uye kubudirira. Haisi chete inonakidza, asi inoratidza kuti iwe unogona kuita zvakafanana.
"Zvishandiso zveTitans: Iwo maTactics, Maitiro uye Maitiro eBhirionea, Mifananidzo, uye Nyika-Kirasi Vanoita. mubatanidzwa wekukurudzira wenyaya kubva kune anozivikanwa bhizinesi podcaster Tim Ferriss, ”akadaro Joshua Tatum, Co-Muvambi of Nzvimbo dzeCanvas. “Idzi nyaya dzinoratidzira zvakanaka, zvakaipa, uye zvakashata zvehupenyu hwemabhirionia, mifananidzo, uye ngano, zvichipa mepu yechokwadi yemugwagwa wavo webudiriro. Kuita basa nekukurudzira, uchazoda kuudza vanhu ava nyaya idzi. ”
Dzidza kuti vakazviita sei, tevera mumakwara avo, uye siya chiratidzo chako pasirese.
Kubudirira Kunyangwe Kusava Nechokwadi
Kutaura chaiko - isu tese tinozvidzora-nguva nenguva. Munguva dzakaoma, tinogona kubatsirwa nemabhuku anotigarisa pasi uye anowedzera chivimbo chedu. Ndiyo nzira iri nani pane kugara wakanamatira kune tambo nhau!
“Kudzidza kuziva uye kutora mikana mukati menguva yemhirizhonga ndicho chinangwa che Gadzira iro Ramangwana + iro reInnovation Handbook: Maitiro Ekufunga Kunokanganisa naJeremy Gutsche, ”akadaro Shahzil Amin, Managing Partner kuKarlani Capital uye Muvambi weEmagineer uye ZvakanakaBefore. “COVID-19 yakachinja mashandisiro atinoita bhizinesi. Munguva yedenda, makambani mazhinji akakundikana nekuda kwekushayikwa kwekunzwisisa uye kushanduka. Asi vamwe vakabudirira nekushandisa kufunga kunokanganisa kuti vaone shanduko mune zvinodiwa nevatengi uye nekukurumidza kuchinja kuti vasangane navo. "Izvi zvakakosha mushure mekupararira kwemahombekombe kune mabhizinesi anoenderera mberi."
Usabatwa wakasununguka nezviitiko zvepasirese. Gadzirira nekuverenga mabhuku akakodzera uye kutora pfungwa inononoka.
Kubatana kwedu nevamwe vanhu kwakakosha zvakanyanya kuhupenyu hunofadza uye hunobudirira. Kune mamwe mabhuku echinyakare anotibatsira kuvaka nekugadzirisa hukama zvakanyanya, saka usarasikirwa nemukana wekuaverenga pakutanga.
"Kana iwe uchida kuti vanhu vakude, chirega kuvatsoropodza, Dale Carnegie anoparidza mubhuku rake remifananidzo, Nzira Yokukunda Shamwari uye Kuchinja Vanhu, "Akadaro Michael Scanlon, CMO uye Co-Muvambi of Roo Skincare. “Hapana musiyano wakakosha pakati pehukama hwehukama nehukama hwebhizinesi. Kana zvasvika kune hunyanzvi hwekutaurirana, ivo vaviri vanoshandisa zvakafanana misimboti. Rimwe bhuku rinokurudzira ndi David J. Schwartz ', Mashiripiti eKufunga Kwakakura, iyo inopa nzira dzinobatsira dzekuzvidzidzisa kufunga uye kuzvibata nenzira yako kusvika pazvishuwo zvako zvese. ”
Chokwadi, unogona kutarisa mavhidhiyo kana kuverenga zvinyorwa, asi hapana chinokunda chiitiko chebhuku chairo.
Tsika uye Maitiro
Tose tiri zvisikwa zvetsika. Mubvunzo ndowe - ndedzipi tsika dziri kukubatsira iwe kubudirira, uye ndeapi ari kukutadzisa?
"Bhuku rakanakisa kuverengerwa nevatungamiriri"7 Tsika dzeVanhu Vanonyanya Kubudirira”Akadaro Jason Wong, CEO of Doe Lashes. “Bhuku iri rinopinda mukugadzira tsika dzakanakisa dzekuti ubudirire pasi rose nekuritsemura kuita zvidimbu zvinodyiwa. Ndinoikurudzira zvikuru kunaani zvake. ”
Sekutaura kwaSocrates, hupenyu husina kuongororwa hauna kukodzera kurarama, saka tanga kuverenga uye uwane zvimwe nezvako uye nemafambiro aunoita kuburikidza nenyika.
Bhuku haridi kuti rive chiuru-peji remavara kuti ribudirire uye rinobatsira. Mamwe emabhuku edu atinofarira akapusa uye akareruka kuverenga neshoko rakajeka, repasirese.
"Paul Arden"Hazvina Kukodzera Iwe Kuva, Izvo Zvakanaka Zvaunoda Kuti Uve: Bhuku Renyika Rinotengesa Zvakanakisisa ” gwaro muhomwe pamusoro pebudiriro rinopa anokurumidza quips uye zvidimbu zvehungwaru zvaunogona kushandisa mubhizinesi uye nehupenyu hwako, " akadaro Dr. Zachary Okhah, Muvambi uye Chief Chiremba at PH-1 Miami. “Nounyanzvi hunoshamisa, kutora mifananidzo, uye mifananidzo, zvakazara-zvinonakidza. Hazvina Kunaka Iwe inovhara zvese kubva pane zvakapusa mazano zvichikubatsira iwe kukunda matombo epfungwa kusvika kudzingwa chingave chinhu chakanaka. Iri ibhuku rinobatsira kuverenga peji paunenge uchida nzwisiso inokurudzira. ”
Kungoti nekuti bhuku rakareba uye rakaoma, hazvireve kuti nguva dzose rakakura! Dzimwe nguva iwe unongoda kuzvichengeta zviri nyore.
Kana iwe ukawana nugget yehungwaru mumapeji ebhuku rakakura, rinogara newe nekusingaperi, uye hapana anogona kuzvibvisa. Uyezve, paunowedzera huchenjeri, unove wakashongedzerwa zvirinani kubata matambudziko akaomarara ehupenyu.
"In Nzira Yokukunda Shamwari uye Kuchinja Vanhu, rimwe remabhuku anotengwa kupfuura mamwe ose, Dale Carnegie akati tibvise maziso edu pachedu uye kuratidza kufarira kune vamwe kana tichida kufarirwa, ”akadaro Haim Medine, Co-Muvambi uye Creative Director at Maka Henry Zvishongo. “Zano iri harinei nehukama hwega chete, asi zvakare rinobatsira mukuvandudza hukama hwehunyanzvi. 'Kana tikazvitenda, tinogona kuzviita' raive meseji inokurudzira David J. Schwartz yakapihwa mubhuku rake rine simba, Mashiripiti eKufunga Kwakakura. Tinogona kuva nechishuwo chose ichocho muhupenyu hwedu nekungoita zvisimbiso zvinosimbisa izvo zvitendero. ”
Uine zvinopfuura gumi nemaviri ebhuku kurudziro kubva kune makuru mabhizimusi vatungamiriri, iwe une rakanyanya stack yekushandira kuburikidza. Takura e-kuverenga yako kana kubata mamwe mapepa-chero zvaunoita, usambomira kuverenga!